Luka Modric oo 26 jir ah ayaa qorsheynaya inuu gudbiyo warqad uu ku codsanyo in Tottenham ay iska iibiso todobada maalmood ee soo socoya, iyadoo ciyaaryahankan lagu qiimeeyo 30 milyan ginni ay isku heystaan Manchester United iyo Real Madrid. Sidaasi waxaa daabacday The Sun.
Tottenham ayaa laga yaabaa inay isaga yareyso xanuunka ay ku weynayaan Luka Modric inay la soo saxiixdaan xiddiga khadka dhexe ee Real Madrid Nuri Sahin oo 23 jir ah, kaasoo qeyb ka noqon kara heshiiska Modric. Sida ay qortay Daily Mail.
Chelsea ayaa ku dhow inay la soo wareegto weeraryahanka kooxda Fiorentina Stevan Jovetic oo 22 jir ah, ka dib markii loo sheegay inay ku heli karaan 25 milyan ginni. Sida ay qortay Daily Star.
Napoli ayaa u sheegtay Manchester City iyo Chelsea inay iska ilaawaan saxiixa weeraryahanka reer Uruguay Edinson Cavani oo 25 jir. Sidaasi waxaa qortay The Sun.
Kooxda ka dhisan Imaaraadka Carabta ee Al Shabab ayaa u muuqata inay ka laabatay doonistii ay ku doonayeen 32 jirka Michael Owen, ka dib markii ay ku tilmaameen inuu yahay ciyaaryahan mid laga dhameystay. Sida ay qortay Daily Mirror.
Daafaca Ajax Jan Vertonghen ayaa rajadii uu ka lahaa inuu ku biro Tottenham ay u egtahay mid sii muuqbeeleysa sababtoo ah 25 jirkaan ayaa doonaya in lacagta lagu iibsanayo ee ah 9.5 milyan ginni, in laga siiyo boqolkiiba 15, taasoo aysan Ajax ogoleyn. Sida ay qortay The Sun.
Ciyaaryahanka 27 jirka kooxda Borussia Dortmund Lukasz Piszczek ayaa ka mid ah ciyaartoyda ugu horeysa ee ku jira liiska tababare Roberto Di Matteo ee uu ku doonayo daafac midig oo cusub. Sidaasi waxaa qortay West Ham.
Liverpool ayaa diyaar u ah inay u dhaqaaqdo saxiixa 22 jirka weerarka uga ciyaara kooxda reer Russia ee Kuban Krasnodar una dhashay dalka Ivory Coast Lacina Traore. Sidaasi waxa qortay Footylatest.com
Manchester City ayaa dooneysa inay David Silva ku sii hayaan Etihad Stadium, waxaana ay 26 jirkaan u soo bandhigaan heshiis cusub oo horumarin lagu sameeyay. Sida ay qortay Daily Mail.
Intaas ayaa ugu waa weyn wararka suuqa kala iibsiga ku aadan ee ay qoreen saxaafada Ingariiska maanta, 1da bisha July waxaan bilaabi doonaa barnaamijkeenii Wargeysyada Yurub iyo Suuqa Kala Iibsiga oo aan maalin walba kaga hadli doono wararkii ugu danbeeyay ee suuqa kala iibsiga ee Ingariiska, Talyaaniga, Spain iyo Jarmalka.